Gbasara Anyị - AnHui Gaoge Intelligent Equipment Co., Ltd.
Echiche anyị ga-abụ eziokwu gị
GAOGE na-amalite, na-emepụta, na-arụpụta ma na-etinye osisi zuru oke maka ịdị arọ, nkwakọ ngwaahịa, akpa, palletizing, ikechi na ibute akpa na pallets.
Ahịrị akpaaka na-apụta maka ọkwa dị elu nke ntụkwasị obi ha, ogo ha, na teknụzụ ha.
GAOGE nwere nnukwu ahịa, ma nke mba na nke mba, maka ihe ọhụrụ ya, ntụkwasị obi ya na ọkwa dị elu nke teknụzụ ya.
Ikike na ahụmịhe nke ngalaba ọrụ teknụzụ anyị gosipụtara ahaziri iche, azịza doro anya, iji mezuo ihe ndị ahịa ọ bụla chọrọ.
Ruo ugbu a ọtụtụ ụlọ ọrụ dị na China na n'ụwa niile ahọrọla ịdabere na anyị maka ngwọta anyị, nke pụtara n'ihi ịdị mma ha, ntụkwasị obi na arụmọrụ ha.
Osisi mmepụta ihe dị mkpa
Productionlọ ọrụ mmepụta ihe GAOGE, nke dị na Gangji Town, Hefei, Anhui, China, na-ekpuchi mkpokọta ime ụlọ nke 3000 m².
Attaa ntị na igwe nkwakọ ngwaahịa, ebe ọ bụ na 2010 ụlọ ọrụ a kwadebere CNC lathes, CNC punch press, ekwe igwe, igwe laser, grinder wdg.
Site na oke oke na akụrụngwa dịgasị iche iche, ụlọ ọrụ Gaoge nwere ike ịmepụta sistemụ nkwakọ ngwaahịa zuru oke dị mgbagwoju anya.
Coherent na ya n'ichepụta ihe nkà ihe ọmụma, GAOGE amị niile dị ukwuu nke mmiri dị mkpa maka ya igwe na ya osisi.
All GAOGE ngwaahịa e mere na-arụpụtara n'ime ụlọ ọrụ. Iji mezuo nke a, GAOGE nwere ike ịdabere na otu ndị ọkachamara na ndị ọkachamara ọkachamara, nwere ike ịmepụta ụdị igwe ọ bụla site na mmalite ruo na njedebe.
Ojiji nke ulo oru di iche iche nke dabere na igwe onu ogugu, igwe nkpuchi laser, ndi na-ede ihe na otutu ihe ndi ohuru na-enye GAOGE aka imeputa otutu ihe di iche iche nke igwe ya.
Nkà ihe ọmụma a na-emepụta n'ọtụtụ uru maka ndị ahịa, ndị nwere ike ịdabere na njikwa njikwa njikwa zuru oke yana na ntụgharị ha zuru oke, ma na-ekwe nkwa ọsọ kachasị maka igwe ọhụụ yana maka akụkụ ndị ọzọ.
Ngwọta maka mkpa niile
GAOGE na-enye ihe karịrị nanị otu ígwè ọrụ nkwakọ ngwaahịa. Ọ nwere ike ịmepụta usoro zuru oke, site na nchekwa ihe onwunwe na ọmụmụ na ntinye nke usoro mmepụta niile, na-ejedebe na nkwakọ ngwaahịa.
Otu n'ime ụkpụrụ ụlọ ọrụ anyị agbakwunyere bụ ikike ịnye ngwa ngwa ahaziri iche dabere na arịrịọ ndị ahịa. Malite na ọkọlọtọ iwu eji anwale nke ọma, GAOGE nwere ike ịnye usoro nke usoro emere iji meghachi omume n'ụzọ zuru oke maka ihe ndị ahịa chọrọ n'ezie, na-ejikọ ntụkwasị obi, ịdị mfe nke nrụnye na mgbanwe nke iji.
Anyị maara ọrụ dị mkpa anyị na-arụ na teknụzụ azụmaahịa nke ndị ahịa anyị. Ọrụ anyị gụnyere karịa ịnye igwe na akụrụngwa: ihe anyị na-enye bụ ọrụ ndụmọdụ zuru ezu.
Ọrụ nke na - esote ndị ahịa anyị site na ịhazi osisi ahụ maka nrụpụta ya na ịmalite ya, site na ọzụzụ ndị ọrụ na njikarịcha igwe. Mmekọrịta chiri anya na ndị ahịa anyị, nke na-aga n'ihu site n'oge ekele maka ọrụ ndị ahịa anyị, nzukọ zuru oke na nke ọma mgbe a na-ere ahịa, na-ahụ maka ilekọta ndị ahịa anyị.
Ebumnuche nke nzukọ a nwere ike ịchịkọta ya na isi omume atọ:
1. njikwa nke arịrịọ na Mberede
2.jikwa nke mmezi
3. njikwa nke akụkụ ndị ọzọ
Ọsọ ọsọ nke ntinye aka na nzukọ, nwere ike ịkwado ịnyefe onye ahịa, ebe ọ bụla na n'ime awa 48, bụ otu n'ime isi ihe dị elu nke GAOGE.
Na-agbasi mbọ ike maka idu ndú
All anyị ngwaahịa na-amụ, e mere na-arụpụtara n'ime ụlọ ọrụ. Nkà ihe ọmụma banyere mmepụta a ghọrọ usoro nke uru maka ndị ahịa:
1.absolute àgwà akara nke mmiri
2.total akụrụngwa mgbanwe
3.ma kachasị oke ọsọ
Ọrụ 4.accurate na igwe ọhụrụ na akụkụ ahụ mapụtara
Na-aga n'ihu n'ọchịchọ maka ịdị mma
Na ịchụso ebumnuche nke na-emeziwanye ọrụ nke igwe anyị na ọrụ ndị ahịa anyị, anyị ejirila usoro njikwa njikwa maka usoro mmepụta nke anyị, kwekọrọ na usoro ama ama ama ama ama ama n'ụwa niile, ISO 9001-2015, dabere nke e nyere asambodo anyi otutu afo gara aga. Ọzọkwa anyị enwetala akwụkwọ CE maka igwe anyị.